Ugari neInvestment yeCyprus neGold Visa
● Ugari nekudyara kuCyprus nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents eU Citizenship neInvestment muCyprus uye Magweta e Ugari neInvestment muCyprus uye ma broker e real estate Citizenship programmes muCyprus vanoshanda pamwe chete kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veCyprus vanopa mabasa ekugara nekudyara muCyprus, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, Citizenship yechipiri nekudyara muCyprus, Citizenship mbiri nekudyara muCyprus, ugari hwehugari nekugara nekudyara muCyprus , Citizenship nekusingaperi muCyprus, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, Residency nekudyara muCyprus, Residency nezvirongwa zvekudyara muCyprus, Residency nepurogiramu yekudyara muCyprus, wechipiri Kugara nekudyara muKupro, huviri Kugara nekudyara muKupro, kugara uye ugari nekudyara muKupro, kugara uye ugari nekudyara muKupro, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muCyprus, Kugara nehurongwa hwekudyara muCyprus, Kugara nehurongwa hwekudyara muCyprus, kechipiri pasipoti muCyprus, yechipiri pasipoti zvirongwa muCypr isu, chechipiri pasipoti chirongwa muCyprus, pasipoti yepiri yepiri muCyprus, pekugara uye pasipoti yechipiri kuCyprus, repasipoti repasipoti repasi muCyprus, pasipoti yepiri nekudyara muCyprus, yechipiri ugari pasipoti muCyprus, yechipiri pasipoti chirongwa muCyprus, chechipiri pasipoti zvirongwa mu Cyprus, visa yegoridhe muCyprus, vhiza dzendarama muCyprus, zvirongwa zvendarama visa muCyprus, chirongwa chendarama vhiza muCyprus, yechipiri vhiza vhiza muCyprus, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muCyprus, vhiza mbiri vhiza vhiza muCyprus, ugari uye vhiza yegoridhe muCyprus, kugara uye vhiza yegoridhe muCyprus, mugari vhiza mugari muCyprus, dhiza vhiza scheme muCyprus, goridhe vhiza zvirongwa muCyprus.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muCyprus nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muCyprus yeU Citizenship nekudyara: EUR 2.15 mamirioni
Nhanganyaya Cyprus uye Ugari neInvestment
Iyo Jewel yeMediterranean, kana iyo Republic of Cyprus, inyika diki yechitsuwa, inowanikwa kumaodzanyemba kweTurkey uye nechekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweGreek. Icho chitsuwa chechitatu chikuru muGungwa reMediterranean, mushure meSardinia neSicily, nezve huwandu hwevanhu senzvimbo. Cyprus yakamisikidzwa nemaune pakusangana kwenzvimbo nhatu dzevhu: Europe, Asia, uye Africa. Iyi yakapfuura yeBritish Colony, iyo yakatora kuzvitonga kwayo muna 3, yanga iri nzvimbo inozivikanwa yekufarira kwenguva yakati rebei ikozvino. Chitsuwa ichi chave chichiwedzera kuwanda kwekupararira sechinangwa chekare-chevanhu nevanhu vanobva kunzvimbo dzese dzepasi.
Cyprus inogara kumahombekombe egungwa anotambanudzira chinhambwe chakakura, matongo aunogona kufamba-famba nawo, machizi anofadza, uye zita rewaini rakasimbiswa kwazvo pasi (Commandaria). Panzvimbo pehukuru hwayo, Kupro ine huwandu hwakakura hwenhoroondo. MuPaphos, iwe uchaenda pamusoro pezvakanaka zvisaririra kubva munguva yakapfuura mune yakawanda nhamba yezvitoro zvekuchengetedza senge nzvimbo yekuchera matongo iyo yakatangira kumashure kwezana ramakore rechina BC. Izvo zvakasara zvikamu zvekugara kwehumambo, nzvimbo, uye nzvimbo dzekuviga zvakapa guta rino chinzvimbo cheUNESCO World Heritage Saiti. Ichi chitsuwa chinowanzozivikanwa seimwe yenzvimbo gumi dzakakoromoka dzinodzika pasi.
Zviripachena, kuungana pamwe nekuenda kune imwe, nzvimbo isina kujeka haisi nyore. Izvi zvinonyanya kushanda kuCyprus nekuti vanhu havafungi zvakawanda nezverudzi. Nekudaro, vekare-patsva avo vanosarudzwa chitsuwa vanovimbisa kuve vanofara zvikuru uye vanogutsikana nemusha wavo mutsva.
Kana iwe uchinge uchitsvaga imwe ex-pat chinangwa, chengetedza sekushushikana kwekutanga kuti kune akasiyana mapoinzi ezvekuda kugadzikana muJewel reMediterranean, semunhu semhuri. Shingirira pane kuti uwane yakanakisa 5 zvikonzero nei kutamira kuCyprus kunovandudza hupenyu hwako:
Vanokurudzira uye Mutero Unotyoka Kune Vatengi Vekumba
Iyo chaiyo dhirowa yeakasiyana siyana epasirose yekuwedzeredza varidzi vezvivakwa ndeye akasiyana mafambiro avanowana kubva kune yeruzhinji masimba, kusanganisira mutero wemitero, matifiketi emagwaro pachikamu chikuru chemutengo, uye mukana wekutora EU Pasipoti.
Mari yepasi haisati yakwira zvakanyanya kubva pakuora kwavo kwakaipisisa panguva yemari yekukurumidzira yemwaka wa2008 uye kune dzimba dzakawandisa pakutarisa. Chero zvazvingaitika, pane zviratidzo zvekugadzirisa, kunyanya nekuda kwekusimudzira kwehurumende. Muna 2015, nyanzvi dzakaronga chirongwa chipfupi, zvichideredza mutengo wedhipatimendi unofamba zvakanyanya. Mumiriri weHurumende Yezvemari sekupedzisira akataura kuti kukurudzira uku kunogona kutora nguva refu. Akawedzera kutaura nezve mumwe mutemo uchazoburitswa, uyo unodzikisa muripo wepfuma neanosvika 75% uye pamwe ungatoibvisa zvachose muna2017.
Zvinoenderana nemutemo, chero munhu anoenda kupfuura mazuva makumi masere nematatu pagore mudunhu rino anokodzera kuve mugari webasa. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kubhadhara mari kune chero mabhadharo aunowana munharaunda nekune dzimwe nyika. Zvisineyi, zvizvarwa zveBritain zvine nzvimbo iyi yekugara hazvidi kubhadhara mari yekuwedzera mari muCyprus pachipiro chavo cheBritish zviwanikwa; ivo vanongobhadhara manejimendi avo (UK) kubhadharisa pazvikwereti zvakaunganidzwa mushure maApril 183 (inova ndiyo nguva iyo nyanzvi dzakachinja mitemo yekuunganidza mutero yevaridzi venyika yeBritish vanogara kunze kwenyika).
Vekunze vanogona zvirokwazvo kutenga imba kana kutenga ivhu vogadzira imba murudzi urwu. Mutengo wepasi unonzwisisika uchienzaniswa neUS, UK uye nyika dzakasiyana. Mari yakajairwa yeimba kudivi reGreek Cypriot yechitsuwa ichi ingangoita US $ 110,000 (£ 88442, € 98206) pamusoro pechisimbiso chechitambi. Pamusoro pezvo, nharaunda nemabhanga epasi rose echikamu chikuru anoverenga kusvika 70% yeiyo fungidziro izere yeimba.
Nzira yekutenga chivakwa muCyprus inogona kutora kuperetera; zvinogona kutora pamusoro pemwedzi mitatu kuti iwe ugadzirise kutaurirana. Izvi zvinonyanya kuve mugumisiro wakananga wechisungo chinosungirwa chaunofanira kuita kuKanzuru yeVashumiri. Chero zvazvingaitika, kutenderera kuri pachena uye kuri nyore, chero bedzi iwe ukawana nharaunda kuti ikubatsire nezvakanyorwa.
Masikati akakwana uye tembiricha inodziya
Cyprus inokoshesa mamiriro ekunze eMediterranean ane mwaka wepamusoro uye inotonhorera zvechokwadi munguva yechando. Nharaunda iri padyo neequator inokanganisa tembiricha nemweya wayo wese. Vagari veichi chitsuwa vanoona padyo nemazuva mazana matatu nemakumi matatu ezuva rakajeka mukati megore.
Zhizha dzinoramba dzichienderera kweinenge mwedzi minomwe, kutanga kusvika kutanga kwaApril uye kuenda mberi kusvika pakupera kwaGumiguru. Iyo chaiyo tembiricha yemasikati yakatenderedza 7ᵒ C mukati memwedzi iyi uye inokwira kusvika ku32ᵒ C kana zvese zvakanyanya mukati. Tembiricha yekupedzisira-yechirimo inowedzerwa inotsigirwa nemhepo inopisa inotangira kubva kuchamhembe kweAfrica kana kuMiddle East. Nguva yemanheru tembiricha inogona kuchinja chero nzvimbo pakati pe40ᵒC kusvika 13ᵒ C, inoenderana nenzvimbo. Zhizha harisi kungo tsvaira zvakadaro kuwedzera kuoma. Chokwadi, zvakajairika kuona gore mudenga kubva kutanga kwaChikumi kusvika kumugumo wakanyanya waGunyana.
Zuva repakati-gore muCyprus rinogona kushamisa. Nepo vanhu vazhinji vachipinza matanda, zvine hungwaru kupfeka rakachengetedza zuva rakasimba sezvinhu zvinodzivirira (kunge zvipfeko, nguwani, nemumvuri) pavanenge vachidzungaira kunze panguva dzepamusoro, idzo dzinogara kubva kutanga kwemasikati kusvika 3:30 PM. Sunbathers anofanirwa kunwawo mvura zhinji kuti arege kuoma.
Mumatsutso, tembiricha yemasikati yakajairwa, yechikamu chikuru, inodzikira kusvika pa25ᵒ C uye mukati menguva inotonhora yegore, inogona kudonhedza kusvika panosvika 16ᵒ C. Nguva yemanheru tembiricha ingangodzikira kusvika 9ᵒ C. By and by, tichaona mazuva akajeka panguva yese iyoyo uye kusingachanaya mvura yakawanda pakati paNovember naMarch.
VaCyprus vanofadzwa nenzira iyo murudzi rwavo iwe unogona kuenda kuchando uye kutora chinonyudza mugungwa panguva imwe chete. Kubva munaNdira kusvika Kurume ex-pats vanofamba kuenda kumakomo eTroodos kune kutsvedza kunoteverwa nekushambira kunosimbisa mugungwa.
Yakaderera Mhosva Dzemitero
Cyprus yakatambudzwa neshure kwakaratidzirwa nekukakavadzana kwakanyanya pakati pevaGiriki nevaTurkey sezvo nyika idzi dzese dzakaedza kuvimbisa chitsuwa ichi, pasina mhedzisiro. Zvisinei, inogara iri imwe yenyika dzakachengetedzeka dzeEuropean kugara. Vakasiyana-siyana vekuBritish avo vanga vachigara pachitsuwa cheMediterranean kwenguva yakareba vanovimbisa kuti hupenyu hweCyprus nekuchengetedza zvakakwira zvakanyanya kupfuura UK.
Nepo mienzaniso yeumbavha hushoma hwakaverengerwa (kunyanya nevanozorora uye vekare-patsika) panzvimbo inotevera, huwandu hwematsotsi pachitsuwa ichi hwakaderera. Vaongorori vari nenzira iyi uye vanokurudzirwa kuti vachengetedze kuzivikanwa kwavo, mari uye zvinhu zvavo munzvimbo yakachengetedzwa. Vanotsvaga vechikadzi vanofanirwa kudzidzira iwo chaiwo matanho ekungwarira avanogona mune imwe nyika yekunze.
Ichi chitsuwa inzvimbo inoshamisa yekurera vana. Zvinoshanda kuti vana vatambe kunze pasina vabereki vavo vachishushikana pamusoro pavo, sezvo mamiriro ekunze kwese kwese murudzi achiwanzo rusununguko kubva kune chero uye chero kukuvara. Zviripachena, zvakanakira vakuru kuti varambe vakatarisa pavacheche vavo kudzivirira chero matambudziko uye maronda.
Sisitimu yekurapa kuchamhembe nekumaodzanyemba kweCyprus yakafanana nemitemo yenyika. Kufanana nenzvimbo dzakasiyana dzakasiyana, ex-pats inogona kutora pakati peveruzhinji neyakavanzika mabasa ehutano.
Rudzi rweNational Healthcare System inopa mahara ekurapwa kwekurapwa kwechinangwa chekuendesa kune wese munhu. MaCyprus ekurarama kwakaderera anokodzera pasina kana mishonga inobhadharwa. Kurapwa kwedambudziko pamakiriniki ehurumende echimbichimbi kunopihwa kurumbidzwa kune wese munhu, kusanganisira vekunze kwenyika; ngazvive sezvazvingaite, zvinotevera-zvekunzwisisa kurapwa mitengo inofanirwa kubhadharwa nevanhu vasina kukodzera bhiri pamwe nekutarisira kwekuwedzera kurapwa.
Nzvimbo dzese dzemadhorobha dzakakosha dzine musangano wemakiriniki anoitwa nehurumende pamwe chete nemisha inochengeterwa vakwegura, zvipatara nenzvimbo. Iyo hombe metropolitan yakazvimiririra yemabasa ekurapa nzvimbo inokurirwa zvakanyanya nevanozvimirira nyanzvi vachimhanyisa maitiro avo. Chikamu chakanakisa chevaimbove patsika ndechekuti vangangoita vese nyanzvi dzekiriniki vawana zvimwe chidimbu chekugadzirira kwavo kunze kwenyika uye vari kutaura Chirungu.
Kunyange hazvo tsika yekurapwa yakakosha ichishamisa, vagari vakasiyana vasingazivikanwe muCyprus vanoda kushanyirazve nyika dzavanobva mune chiitiko chekuti vanofanirwa kuenda nenzira dzakakosha dzekurapa kana kuda kuwanda kwekufunga kwechipatara.
Chirungu ex-pats vanokodzera kumabasa ekurapa ehurumende zvisinei nekuti havawedzere kuCypriot federal mudyandigere rubatsiro rwekubatsira, chero bedzi vachisangana nemamwe matanho. Tora pano kuti uzive izvi.
Kufamba kwehosha uye hutachiona husingadzivisike pachitsuwa kwave kwakadzikira kwenguva refu. Vokunze vanopinda murudzi havadiwi kuwana majekiseni.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeCyprus
Chishoma kudyara kwe Ugari nekudyara muCyprus
EUR 2.15 mamirioni
Ugari nekudyara kuCyprus
Setifiketi yeKusarudzika ("Citizenship") kana Permanent pekugara mvumo zvichienderana nechirongwa
Kuchengetedza nguva yeUgari nekudyara kweCyprus
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweCyprus
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweCyprus
Cyprus ine nzvimbo huru yenzvimbo. Iine zvirongwa zvinodhura kwazvo zvepasipoti muEuropean Union. Mushure mekuva mugari wemuKupro, unogona kufamba nyore munyika zana nemakumi mashanu pasina vhiza. Iwe uchave nemukana wekurarama, kufamba uye kushanda mune chero nyika dzeUS. Cyprus inokupa iwe yakachengeteka nharaunda. Iko kunowanikwa yakawanda yekutanga kirasi yekurapa nzvimbo. Nyika ine yakaderera kwazvo mutero uchienzaniswa nedzimwe nyika dzeEU. Zvakare, Cyprus ine hurongwa hwakakura hwekudzidzisa. Nyika haidi chero mutauro kana zvivakwa zvinodiwa.
Iwo mabhenefiti epasipoti yeCyprus anoshandawo kune vepedyo vemhuri, vanogona kuve vana vari pasi pe18, kana vana vari pamusoro pe18 vanovimba nemubati wepasipoti. Iko kune mukana wekusanganisira mukwanyina mukushandisa.
Ugari Nechirongwa chekudyara muKupro insite
Maitiro ekunyorera ndeimwe yekukurumidza pasi rose. Zvinogona kutora kusvika pamwedzi mitatu. Cyprus haina chero zvipingamupinyi pahukama hwenyika. Iwe haufanirwe kuve muCyprus kuti uchengete ugari hwako. Iwe unongodiwa chete kushanyira Kupro makore ese manomwe. Mushure mekuwana ugari hwako uchawana zvese mabhenefiti ayo Cyprus inogona kukupa iwe.
Kuti uwane Pasipoti yegoridhe yeKupro unodikanwa kuti utsvage maEUR 2 mamirioni kusvava muzvivakwa, kambani inofanirwa kunge iine vashoma vagari vemu5 vanoshanda kana mune zvemari zvinhu zveCyprus. Iwe unogona zvakare kuisa mari mune izvi zvese panguva imwe chete. Iko mari inofanirwa kuchengetwa kwemakore matatu.
Zvakare, iwe unosungirwa kutenga real estate muCyprus iyo inodhura angangoita EUR 500,000. Iwe uchafanirwa kuchengetedza iyo chivakwa kwehupenyu hwese. Kana iwe uchida kusarudza iyo yekutengesa zvivakwa sarudzo ipapo mutengo weiyo chivakwa uchave uri chikamu cheEUR 2 mamirioni mashoma emari inodiwa. Muchiitiko chekuva nemazita evabereki vako kana weumwe wako muchikumbiro, vabereki vanodawo kutenga midziyo inokoshesesa mashoma eEUR 500,000. Kana, ivo vaviri vacho vanogona pamwe kutenga chinhu chakakosha chidiki cheEUR 1,000,000.
Mari yehurumende yechikumbiro iEUR 7,000 kumunhu wese mukuru. Mari yekuraira inoenderana neshanduko zvichienderana nezera uye huwandu hwemhuri.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweCyprus
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents kuCyprus uye Citizenship ne Investment Lawyers zveKupro inopa vatengi uye mhuri dzavo muCyprus nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuCyprus, kugara nekudyara kubva kuCyprus uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa zveCyprus, kuburikidza nezvatinokwanisa mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveCyprus, inokwanisika investment immigration solicitors kuCyprus, inokwanisika Citizenship nekudyara vanachipangamazano kuCyprus, inokwanisika Citizenship neinvestment magweta eCyprus uye inodhura yekufambisa yekufambisa femu yeCyprus
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuCyprus.
Ugari neInvestment yeCyprus kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muCyprus nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muCyprus, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kuCyprus. Isu tinosungirirwa nevashoma varidzi venzvimbo muKupro vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muCyprus, kutora zvakanaka kudzoka.
Unoda kuziva - Cyprus Citizenship by Investment
Ugari neInvestment Gweta reCyprus rinopa zvakadzama magwaro rubatsiro kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuCyprus. Yedu akajairwa masevhisi e Citizenship neInvestment kuCyprus inosanganisira:
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweCyprus kune vatengi kuti vawane Citizenship yeCyprus uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kuCyprus isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari nekudyara kunyorera kuCyprus Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kuCyprus uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kuCyprus zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveCyprus.
Kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweKupro changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muCyprus kune zvakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muCyprus:
Citizenship nebasa rekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuCyprus.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muCyprus kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuCyprus.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muCyprus.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara zveKupro haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muCyprus.
Citizenship nebasa rekudyara kuCyprus haisi yemabhizimusi anobata nezvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvebayoloji kana zvombo zvenyukireya muCyprus.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweCyprus haruwanikwe kune vanhu veCyprus vanoita mukutengesa, kuchengetedza muCyprus, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara zveKupro haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa zveKupro hadzisi dzezvitendero uye masangano avo muCyprus.
Citizenship nebasa rekudyara mu Saipurasi haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muCyprus.
Ugari Hwedu magweta muCyprus haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muKupro.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veCyprus neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba chero kupi zvako kubva kuzviremera muCyprus zvekubvumidzwa kunyorera. Citizenship nekudyara muCyprus.
Ugari nekudyara muCyprus nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muCyprus yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muCyprus.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose nehunyanzvi hwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveKupro, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Hugari nevekudyara masevhisi eKupro inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheCyprus.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuCyprus inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuCyprus.
Ruzivo rweHurumende nevemari vanokumbira kuCyprus nevamiriri vepamutemo kuCyprus vachipa rutsigiro kune vatengi.
Usati uri Citizenship yeCyprus uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuCyprus
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Cyprus, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuCyprus ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuCyprus
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweCyprus ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veCyprus, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weUgari nehurongwa hwekudyara kweKupro uye zvimwe zvikwereti.
Ugari neInvestment muCyprus uye Mamwe maSevhisi
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kuCyprus, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muCyprus, ayo ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eCyprus zvichitigadzira shopu imwechete yekuCyprus nenyika dze106.
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kuCyprus nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muKupro nepasi rese.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Cyprus kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muCyprus kutanga pakarepo muKupro.
Mushure meCitizenship nekudyara kuCyprus, setup bhizinesi mu Saipurasi.
Magweta e Citizenship neInvestment muCyprus
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeCyprus uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuCyprus, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuCyprus ine vamiririri vekunze vanoenda kuCyprus, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeCyprus ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeCyprus vanhu nemhuri dzavo. Hwedu Hugari nechikwata chekudyara kuCyprus chinopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweKlayenti.
Simba regweta reKupro rinodikanwa kune ese matanho emutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vekudyara muCyprus. Kana iwe uri muCyprus kana kuronga kushanyira Cyprus, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muCyprus
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweUgari nekudyara muCyprus?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muCyprus ndeye EUR 2.15 mamirioni.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuCyprus yeU Citizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muCyprus nevamiriri muKupro vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muCyprus.
Ugari neInvestment kuCyprus inodhura?
Mutengo weUgari neInvestment kuCyprus uye Citizenship neinvestment fund zvinodiwa kuCyprus ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeCitizenship neInvestment kuCyprus, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuCyprus kana investor visa kuCyprus?
Citizenship nekudyara masevhisi eanogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mashoma mienzaniso ndeye Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuCyprus kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance zveKupro
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuCyprus
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeCyprus